Sunday 3rd of July 2022 / 12:06:39 PM
नेपालमा उत्पादित जलविद्युतको कूल जडित क्षमता १६ सय मेगावाट पुगेको छ । थर्मल उत्पादनलाई समेत जोड्दा थप ५३ मेगावाट हुने बताइएको छ ।
जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहतका विद्युत गृहबाट ५ सय ९४ मेगावाट,निजी तथा सहायक जलविद्युत कम्पनीबाट उत्प
भक्तपुर, १ साउन २०७८, शुक्रबार । भक्तपुरमा सेवा कामना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले सेवा आरम्भ गरेको छ । कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गरेर सेवा कामनाले ब्याबसायी एबम सहकारीकर्मीद्वय श्री सुनम सुब्बा र श्री बिकाश घटुवा ज्यूले रिबन काटेर संस्थाको
अनलाइन दर्पण 2021-07-11
काठमाडौं । मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ सोमबार बाँडफाँट हुने भएको छ ।
कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीजेश घिमिरेले प्रिअलटमेन्ट सकिएको र आगामी सोमबार आईपीओ बाँडफाँट हुने जानक
काठमाडौं। निषेधाज्ञाका कारण बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्रका २५ प्रतिशत उद्योगहरु बन्द भएका छन्। उत्पादन बजारमा पठाउन समस्या भएकाले उद्योग बन्द भएका हुन्। हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुले पनि क्षमताको ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेको बालाजु औद्योगि
काठमाडौं, १ असार । सातै प्रदेश सरकारहरुले आज प्रदेशसभा समक्ष आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । असार १ गते प्रदेशसभा समक्ष बजेट पेश गर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार सातै प्रदेशले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक बर्ष ७८/८९ बजेट प्रस्तुत गर्न
यो साता दुई वटा आईपीओ, कति भर्ने ?
अनलाइन दर्पण 2021-02-05
योसाता ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावर कम्पनी र महिला लघुवित्तमा प्राथमिक सेयरका लागि आवेदन दिन सकिने भएको छ । ग्रीनलाइफले सर्वसाधारणका लागि शुक्रबार नै आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ भने महिला लघुवित्तले बुधबारबाट प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्नेछ ।
सिंगटी हाइड्रोपावरले स्थानीयवासीका लागि सेयर खुलायो
श्रीकृष्ण बुढाथोकी । माघ ४, दोलखा। दोलखा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने सिंगटी खोलामा निर्माण भएको २५ मेगावाट क्षमताको सिंगटी जलविद्युत आयोजनाले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरुका लागि साधारण शेयर आइपिओ खुल्ला गरेको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंककाे अध्यक्षमा ढकाल निर्विरोध निर्वाचित
अनलाइन दर्पण 2021-01-13
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडकाे सञ्चालक समितिकाे अध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । बैंकको आज सम्पन्न १४औँ वार्षिक साधारणसभाले ढकालको अध्यक्षतामा बैंकको नयाँ सञ्चालक समितिको समेत निर्वाचन गरेको थियो ।
कोरोना रोकथामकालागि ७ अर्ब बजेट निकासा
अनलाइन दर्पण 2020-11-11
काठमाडौँ, २७ कार्तिक । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम शीर्षकमा झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ निकासा पाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि हालसम्म ६
भारतबाट नेपालतर्फ अवैधरुपमा ल्याउदै चाँदीको गरगहना नियन्त्रणमा
अनलाइन दर्पण 2020-11-10
अंगद यादव/नवलपरासी पश्चिम २५ कार्तिक । नवलपरासी पश्चिमको सीमा क्षेत्रबाट तीन लाख भन्दा बढीको चाँदीका गरगहना र मुर्ति गेरमा अस्थायी सशस्त्र प्रहरी पोष्टबाट नियन्त्रणमा लिएको छ ।
पाल्हिनन्दन गाउँपालिका वडा नं.-५ चमनटोलामा बिषेश सुराक
जनरल इन्स्योरेन्सको आइपिओ बाँडफाँड कहिले?
काठमाडौं । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले निष्काशन गरेको साधारणस शेयर (आइपिओ) कहिले बाँडफाँड हुन्छ ? यो आवेदन दिने ८ लाख २० हजार ४३१ जना आवेदकले सोध्ने प्रश्न हो । आइपिओ बाँडफाँड कहिले हुन्छ ?
प्रबन्धक एनआइबीएल एस क्यापिटल
सरोज ठकुरी, दोलखा २,असोज। कालिन्चोक गाउपालिका वडा नम्बर ५ लापिलाङ अवस्थित घट्टेखोलामा आएको बाढीले करिब ३0 घरलाई क्षति पुर्याएको छ।उक्त पहिरो श्रावण महिनामा रानिबनमा आएको पहिरोका कारण धेरै घरका मानिसहरू देउराली आधारभुत बिध्यालयमा बस
नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर गाउपालिका वडा नं.-३ बाउन्नगढि बाट ४०क्विन्टल मटर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइएको छ । लकडाउनको मौका छोपि तस्करहरुले बाउन्नगढिबाट भारत तर्फ मटर ओसार पसार गर्न
यतिबेला विश्व कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न माहामारीको सामना गरिरहेको छ। धेरै देश लकडाउनमा छन्। नेपालमा पनि लकडाउन सुरू भएपछि जनजीवन अत्यन्तै कस्ठकर बन्दै गईरहेको छ । धेरै उद्योग, कलकारखानाहरु तथा अफिसहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कतिपय कार्यलायहरु
काठमाडौं, १ असार । देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार, प्रदेश सरकारहरुले दोस्रो पटक वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।
संविधानतः संघ सरकारले जेठ १५ मा बजेट
काठमाडौं, १३ वैशाख । सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी बढेको जनाएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दैं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करिब १ खर्ब ८५ अर्ब लगान
काठमाडौं । दुई पक्षीय सम्झौता विपरित भारतले नेपाली चियामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक सामग्री र कृषिजन्य वस्तुको आयात–निर्यातमा कुनै रोकावट हुने समझदारी भए पनि भारतले नेपालमा उत्पादिन चियामा